လူတိုင်းကကြော်ငြာကိုမုန်းကြတာ။ | Martech Zone
သောကြာနေ့, အောက်တိုဘာလ 9, 2015 တနင်္လာနေ့, အောက်တိုဘာလ 12, 2015 Douglas Karr
ကြော်ငြာနိဂုံးနှင့်ပတ်သက်သောအွန်လိုင်းစကားဝိုင်းများစွာရှိသည်။ တွစ်တာဟာသူ့ရဲ့ကြော်ငြာအစီအစဉ်မှာမအောင်မြင်ဘူး။ Facebook သည်အောင်မြင်သည်။ သို့သော်သုံးစွဲသူများသည်နေရာတိုင်း၌ကြော်ငြာများကိုငြီးငွေ့နေကြသည်။ လခပေးရတဲ့ရှာဖွေမှုကမယုံနိုင်လောက်အောင်ဝင်ငွေကိုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အွန်လိုင်းပေါ်မှာသတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းအတွက်အခြားနည်းလမ်းများလူကြိုက်များလာသည်နှင့်အမျှရှာဖွေမှုကျဆင်းနေသည်။
အကယ်၍ သင်သည်စားသုံးသူများကိုမေးမြန်းလျှင် (နှင့် TechnologyAdvice နှင့် Unbounce တို့က) အကယ်၍ သင်သည်စားသုံးသူများကိုမေးပါက၎င်းတို့သည်တန်ဖိုးမရှိဟုသင်ထင်လိမ့်မည်။
ဖြေဆိုသူ ၃၈% ကဖြေဆိုခဲ့သည် အာရုံမစိုက်ပါနဲ့ အွန်လိုင်းကြော်ငြာများကိုရန်။
ဖြေဆိုသူ ၇၉% ကဖြေဆိုခဲ့သည် အွန်လိုင်းကြော်ငြာကိုဘယ်တော့မှမနှိပ်ရ.
ဖြေဆိုသူ 71% ကဆိုသည် ကိုယ်ပိုင်နှင့်အပြုအမူ -based ကြော်ငြာများ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောသို့မဟုတ်နှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြ၏။
ဖြေဆိုသူ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့ဟာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ် ကတိကဝတ်ဝယ်ယူ ကြော်ငြာကိုနှိပ်ပြီးနောက်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ မေးလာရင်ပြည်သူတွေရဲ့အမြင်ဟာသင်ရရှိတဲ့ရလဒ်တွေနဲ့အတော်လေးကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်ကြော်ငြာများသည်သေနေသည်ဟုထင်လျှင်သို့မဟုတ်၎င်းတို့အားဖယ်ရှားပစ်လိုလျှင်၊ နေရာတိုင်းတွင်ကြော်ငြာနံရံများနှင့်စပွန်ဆာအကြောင်းအရာများကိုစတင်သင်ကြားသည့်အထိစောင့်ပါ။ ငါအများကြီးမဟုတ်ဘဲခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ကြော်ငြာထက်သိသာသက်ဆိုင်ရာကြော်ငြာရှိသည်ချင်ပါတယ်!
အွန်လိုင်းငွေပေးချေသောမီဒီယာသည်နာမည်ကောင်းရထားသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတော်များများက၎င်းကို၎င်းတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာ၏အဓိကကျသောအစိတ်အပိုင်းဟုယူဆကြသော်လည်းဝေဖန်သူများစွာလည်းရှိသည်။ အကယ်၍ သင်ဝဘ်ဆိုက်ရှာဖွေလျှင်ကလစ်နှိပ်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးသောအလေ့အကျင့်များပါသောရာနှင့်ချီသောဆောင်းပါးများကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။
အဓိကအချက်ကဒီသတင်းအချက်အလက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အကြံဥာဏ်အချို့နှင့်သင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏ထိရောက်မှုကိုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ သို့သော်အောက်ခြေလိုင်းသည် ROI ၏ကိစ္စဖြစ်သည်။ အလွန်သေးငယ်သော click-through နှုန်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းဖြင့်ပင်မဟာဗျူဟာသည်အမြတ်အစွန်းရဆဲလား။ သငျသညျ omnichannel နှင့်အဝင်မဟာဗျူဟာခဲအသံအတိုးအကျယ်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကလစ်နှိပ်ပါတစ် ဦး လျှင်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ယုံမှားစရာမရှိ; သို့သော်ကြော်ငြာတစ်ခုတည်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ထိရောက်မှုရှိသည်။ တစ်ယောက်ယောက်ကသူတို့ကိုနှိပ်နေတယ်မဟုတ်လား။
TechnologyAdvice နှင့် Unbounce မှအစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံကိုရယူပါ။ လေ့လာမှု - ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်အွန်လိုင်း Paid မီဒီယာသည်ထိရောက်မှုရှိသေးသလား? အွန်လိုင်းမီဒီယာတွင်တိုးတက်မှုအတွက်နေရာနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်ကူးပြောင်းခြင်းအတွက်သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာကိုမည်ကဲ့သို့ပိုကောင်းအောင်လုပ်ရမည်ကိုလေ့လာရန်။
Tags: ကြော်ငြာတင်ရန်လစာကြော်ငြာများပေးဆောင်လူမှုရေးကြော်ငြာတစ် ဦး ကလစ်နှိပ်ပါကြော်ငြာနှုန်းပေးဆောင်PPC ကြော်ငြာနည်းပညာunbounce